Iberibe nkata Ista Uche ọgụgụ isi - echiche maka ụlọ na ubi
Ulo / Obodo
Iberibe ite Ista
19.03.2014 Bipụtara: Senti Art
Echiche Homelọ, Ntụziaka, Ntụziaka Ista
Nkata mado emere bụ ụzọ mara mma ma maa mma iji jee ozi na akwa Ista. Ebube dị egwu maka okpokoro oriri, nke ị nwere ike ijere salads, agụụ, nri dị iche iche.
Vingkpa akwa bekee bụ usoro siri ike, mana ọ dị mma maka Ista na ịhazi akwa. Enwere ọtụtụ ụzọ esi eme, mana ha niile na-adabere n'ụdị arịa ọzọ.
- Nhọrọ mgwakota agwa - dika nke ozo, okpukpo ahu di nma karie ka ha adighi abuba otutu mgbe ichoro, mana nke a metutakwara ufodu n’ime yist butter a na etinye ya na pizzas.
- Ebe nnabata nke gha eme nkata.
- Abụba - ihe oriri ọ bụla ma ọ bụ anụmanụ dabara adabara.
- Agbajiri agbaji na ngaji abụọ mmiri - maka ịgbasa.
- Aluminium foil ma ọ bụ achịcha eji eme achịcha, ọ bụrụhaala na mkpuchi mgwakota agwa enweghị ike ịdị na pan.
- Tkwụ na ntanetị iji nwapụta ụfọdụ ụdị braid na aka, ọ bụrụ n’inweta otu.
Nyefee otu akụkụ nke ọkpụrụkpụ ịchọrọ ma bee mpempe kwesịrị ekwesị. Na-atụgharị pan refractory n'akụkụ, kpuchie ya na foil ma ọ bụ akwụkwọ dị ka achọrọ wee jiri nlezianya ghee elu ahụ dum. Ijiri mpempe mgwakota agwa dị na ntọala tee mmanụ site na iji usoro a họọrọ, jiri nlezianya bechapụ n'ọnụ na-enweghị isi na ị nwere ike ịtụgharị ọzọ. Mechie nrụgide, ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, were nchekwa nhicha ihe. Younwekwara ike itinye ogwu nke ihe okike site na ibelata ụdị pasta (dịka ọmụmaatụ, nke nwere akwụkwọ). Mgbe ekpuchiri pan ahụ dum, pịa nke elu, ntụgharị. maka ala nke ala ka ọ bụrụ, ghaa akwa etiri wee gbanye na 180 Celsius tupu 220 ° C (dabere na mgwakota agwa). Ime ruo mgbe agba aja aja. Ọ bụrụ na achọrọ, hazie ma tinye aka nkata na ukem. A na - echekwa ya site n'enyemaka nke nhicha ihe mgbe azụ dị jụụ. Nke a siri ike karị na mgwakota agwa soda. Detuo si na ntọala, kwe ka ị daa jụụ ma ị dị njikere maka ihe ijuanya ezumike ahụ. Ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ ije ozi n'ime awa 24 na-esote, mgbe ahụ, mgbe ịdajuru, ịkwesịrị itinye nkata ahụ na envelopu.
nhazi, Ista Ista, Nkata Ista, Iberibe nkata Ista, echiche, echiche maka ulo, echiche maka Ista, nkata, Nkata Ista, nkata mgwakota agwa, akwa nkata, nkata ejiri akwa, Ista uzommeputa, Ntụziaka maka nkata, Ezi ntụziaka, mgwakota agwa Ezi ntụziaka, echiche maka ulo, ime ime, arịa ụlọ, n'ime ime, imewe echiche, ụlọ ọgbara ọhụrụ, icho mma, nka nka
Ideasfọdụ echiche maka ime ụlọ
A maara ọtụtụ ụdị na ịchọ mma n'ime ụlọ. Etu esi etinye ulo gi ...
Ihe ịchọ mma maka yad na ogige
Echiche nka na-ezighi ezi maka icho mma ogige na ubi. Ọtụtụ n'ime ndị rep ...
Ihunanya na ulo ezumike
Ma ị sitere na nwoke ma ọ bụ nwanyị dị nro ma ọ bụ nke dị nro, ihe atọ a ga-adịrịrị…
Mee onye nhazi ya na akpa ego maka ihe ndina
Anyị niile hụrụ nkasi obi nke akwa na izu ike mgbe anyị nwere ohere ...
Chickenkwụ ọkụkọ ara
Nke a bụ ụzọ na-atọ ụtọ ma mara mma iji ejiji ụkwụ ọkụkọ juru n'ọnụ, dịka nri na ...
Echiche ọma n’ubi
Ame olulu n’ime ogige ahụ bụ ọrụ nke nwere ike ịnwe ọtụtụ ngwa - site na ọcha…
Echiche maka akwa n'ime ogige
Y’oburu n’inwe odo mmiri n’ahia - ọdọ mmiri, iyi, isi iyi, isi iyi ma obu oke ohia, i…
Chọọ ebe a na-edebe ihe ochie - Họrọ ọnwa - Febụwarị 2020 Jenụwarị 2020 Disemba 2019 Nọmba Nọvemba 2019 Ọktoba 2019 Septemba 2019 August 2019 Julaị 2019 June 2019 Mee 2019 Eprel 2019 Machị 2019 Febụwarị 2019 Jenụwarị 2019 Disemba 2018 Ọktoba 2018 Septemba 2018 August 2018 Julaị 2018 June 2018 Mee 2018 Eprel 2018 Machị 2018 Febụwarị 2018 Jenụwarị 2018 Disemba 2017 Nọmba Nọvemba 2017 Ọktoba 2017 Septemba 2017 August 2017 Julaị 2017 June 2017 Mee 2017 Eprel 2017 Machị 2017 Nọmba Nọvemba 2016 Julaị 2016 June 2016 Mee 2016 Eprel 2016 Machị 2016 Jenụwarị 2016 Disemba 2015 Nọmba Nọvemba 2015 Ọktoba 2015 Septemba 2015 August 2015 Julaị 2015 June 2015 Mee 2015 Eprel 2015 Machị 2015 Febụwarị 2015 Jenụwarị 2015 Disemba 2014 Nọmba Nọvemba 2014 Ọktoba 2014 Septemba 2014 August 2014 Julaị 2014 June 2014 Mee 2014 Eprel 2014 Machị 2014 Febụwarị 2014 Jenụwarị 2014 Disemba 2013 Nọmba Nọvemba 2013 Ọktoba 2013 Septemba 2013 August 2013 June 2013 Mee 2013 Eprel 2013 Machị 2013 Febụwarị 2013 Jenụwarị 2013 Disemba 2012 Nọmba Nọvemba 2012 Ọktoba 2012 Septemba 2012 August 2012 Julaị 2012 June 2012 Mee 2012 Eprel 2012 Machị 2012